မဗဒေါရဲ့ ဗဒေါလမျး: ကျမနဲ့ ဖုန်းသရဲ
Posted by mabaydar at 4:20 AM
ဟားဟားဟား အကြံပိုင်သောငခွေး ခွိ။ ရီသွားတယ်။ အဲဒီလိုလုပ်ကြဆို ဒါမျိုးလက်ခံတဲ့ မိန်းခလေးလဲရှိတယ်ကွဲ့။ သူ့အသိုင်းအဝိုင်းနဲ့သူပေါ့ကွယ်။ ခုလိုနည်းစနစ်ကောင်းနဲ့ ဖယ်ထုတ်လိုက်နိုင်တာ နှစ်ဦးနှစ်ဘက်ကောင်းပါတယ်။ မဗေဒါ လူမှုရေးဘက်မှာ အများကြီးတိုးတက်လာပြီ။ ဒါနဲ့ဖုန်းနံပါတ်လေးတဆိတ်လောက် .. ငှင်းငှင်းငှင်း
3/07/2009 9:15 AM
မဗေဒါ မဗေဒါ !!! ဟင်းးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးး !!!!!!!
good problem solving skill.......
i want to see your whole family today 1pm at penisula. I also bring my wife and2sons.....
3/07/2009 10:46 AM
ဟား ဟား လာရောက်သင်တန်းတက်လိုပါသည်..ကောင်၏
3/07/2009 1:21 PM
ဟားဟား။ အဲဒီနည်းနဲ့ အဆင်ပြေ ခဲ့တဲ့ အတွဲတွေ လည်း ရှိပါ့ဗျာ။ မက်ဆေ့နဲ့တော့ မဟုတ်ဘူး။
3/08/2009 12:22 AM
BAY LU WA said...
HA HA... THIS GUYS STILL SENDING SMS TO YOU BECAUSE THEY NEVER SEE YOU BEFORE. THE BEST WAY YOU CAN SOLVE THIS PROBLEM IS TAKE YOUR PHOTO AND JUST SEND BACK MMS TO THEM. SURELY THEY WILL STOP DISTURB YOU.. :D
3/08/2009 2:52 AM
ကောင်းလိုက်တာ မဗေဒါရေ.. အိုင်ဒီယာကတော့ အလွန်မိုက်..
တော်မီလဲ ပိုလီစတက်တုံးကတော့ အဲလိုခင်ချင်တယ်ဘာညာဆိုတဲ့ မက်ဆေ့ခ်ျတွေ ပြန်ဖူးပါတယ်..အပျင်းပြေပေါ့..အခုဆိုရင်တော့ စိတ်ပြောင်းနေပြီ..ပျင်းစရာကြီး..
ပိုလီတက်စတုံးက ချက်တင်းကိုကြိုက်ခဲ့ပေမဲ့ အခုဆိုရင်တော့ ဂျီတော့ခ်မှာ လူအသစ်တွေလာချက် မေးခွန်းတွေလာမေးနေရင်တောင် စိတ်တိုနေပြီ..
3/09/2009 9:45 AM
ဟီးးးးးဒီpost ကိုတော့ တော်တော်ကြိုက်တယ်။
3/16/2009 7:04 AM
ကျနော်လဲကြုံဖူးပါ့.. ယောကျာ်းအသံနဲ့ဖြေလိုက်တော့.. ဆောဒီး ဆိုပီးပျောက်သွားရော.. ဒါနဲ့ မဗေဒါကင်မရာလေး သဘောကျတယ်ဗျာ.. ပုံတွေရှဲ ပါအုံး။
3/17/2009 10:49 AM
ခင်ပွန်: အဖြစ် TZA က အခမဲ့ သရုပ်ဆောင်ပေ:မည်။ ခရေဖြူမှ ခလေးငြားမည် (သို့) ခလေးအဖြစ် သရုပ်ဆောင်ပေးမည် (ဟီး) စတာနော်
3/23/2009 1:40 PM
အဟိ အဟိ ဗေဒါမရေ ကိုကို မော်ကွန်း လာဖတ်တယ်ကွယ် စနေနေ့ ပင်နီဆူလာ မှာ တွေ့ရအောင် ဟီး ဟီး ..။
For me that is nothing problem. I never take action in any unnecessary message. Anyway you are very clever lady.
အမရဲ့ဖြေရှင်းပုံကို သဘောကျသွားပြီ.. အရင်က ကျမလည်း ဒီလိုမျိုးအဖြစ်မျိုးကြုံဘူးတယ်.. ကျမတုံးကတော့ ရဲတိုင်မယ်လို့ခြောက်လိုက်တာနဲ့ ပျောက်သွားတာပဲ.. =D
anyway, nice post and thanks for this post..
4/15/2009 11:22 AM